Bannerflow: Nhazi, Scale, ma na-ebipụta Mgbasa Ozi | Martech Zone
Dika uzo mgbasa ozi di iche-iche, ikike iwulite, imekota, na inweta ihe ngosiputara banner nwere ike buru nro. Nhazi usoro okike (CMP) nye ikike iji dozie imewe, melite arụmọrụ, ma bulie ihe okike niile na ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Ihe ngosiputa ihe nke Bannerflow na enye gi ikike zuru oke na mmeputa na nkesa mgbasa, na echekwa gi oge na ego.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ gafee ọtụtụ ọwa, n'ọtụtụ ahịa, yana ọtụtụ ụdị, Bannerflow na-ebu ibu, na-enyere gị aka ịnọ na mbido mgbasa ozi dijitalụ.
Atụmatụ Bannerflow gụnyere ikike maka ndị otu mgbasa ozi:
Mee ọkọlọtọ gị - Wụpụta ọkọlọtọ mgbasa ozi bara ọgaranya nke HTML5 maka ngwa na ikpo okwu ọ bụla, site na mkpanaka gaa na mgbasa ozi bara ọgaranya.
ọnụ ọgụgụ - Site na otu ọkọlọtọ, mepụta nha na ọdịiche maka mkpọsa gị.
Ịsụgharị - Na-arụ ọrụ igwe ojii na ndị ntụgharị ka ha dezie kọọpị oyiri ozugbo. Ichefu mpempe akwụkwọ mpụga!
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Ikwu ma kwado na ikpo okwu iji mee ngwa ngwa gafee usoro nrụpụta ọrụ gị niile. Kwuo nke ọma na agbụ email.
Ịtọ oge - Mee atụmatụ mkpọsa tupu oge eruo yana ịdọrọ na dobe arụmọrụ.
ebipụta - Chekwaa oge n'iji mbipụta dị mfe gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi niile, nnukwu ma ọ bụ obere, n'ime ikpo okwu.
Nyochaa ma bulie - Mee mkpebi doro anya ma bulie mkpọsa site na iji atụmatụ dịka okpomoku na ule A / B.
Rịọ nnwale efu
Tags: ad nhaọkọlọtọikpo okwu njikwa mkpọsacmpnjikwa ihe